Ny andraikitra tànan’i Khattab Hamad amin’ny famahàna ny olan’ny tsy fahampian’ny vaovao an-tambajotra mahakasika an’i Sodàna · Global Voices teny Malagasy
"Mbola firenena mistery ho an'ny ankamaroan'ny olona i Sodana "
Voadika ny 20 Janoary 2021 13:10 GMT
Sary natolotr'i Khattab ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Fnamarihana avy amin'ny bilaogin'ny vondrompiarahamonina: Ity dia lahatsoratra ampahany amin'ny andian-dahatsoratra vaovao isaky ny Alarobi antsoina hoe GVer-n'ny Herinandro (GVer of the Week) anasongadinanay mpikambana iray avy amin'ny vondrom-piarahamonina iray hafa ka notendren'ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminy. Fenoy ity takelaka ity raha maniry hanendry olona hatolotra eto ianao.
Khattab Hama dia mpikambana avy amin'ny tarika Afrika Ambanin'i Saharà, mpandray anjara nanomboka tamin'ny Jona 2020. Tao anatin'ny volana enina monja nanoratany ho an'ny GV, lahatsoratra 12 no voasorany, nifandraika amin'ny fanakatonana aterineto, ny olan'ny fahasalamàna, ary ny vokatra nateraky ny revôlisiôna.
Tanatin'ity antsafa natao imailaka ity, zarain'i Khattab ny fomba fahitàny ny maha-zavadehibe ny Global Voices ao anatin'ny tontolon'ny fampahalalambaovao, indrindra fa raha mahakasika an'i Sodana tanindrazany izany.
Global Voices: Ankoatra ny GV, manao inona ianao? Inona no zavatra hafa mahaliana anao?
Injeniera amin'ny fifandraisandavitra aho, miasa amina orinasa iray misahana fifandraisandavitra ao Sodana, araka izany dia any amin'ny birao no andaniako ny ankamaroan'ny fotoanako mandritra ny andro. Rehefa avy miasa, zavatra tiako ny mitrandraka ny vaovaon'i Afrika, indrindra fa Sodana sy avy any amin'ny tendron'i Afrika.
Ho fialamboliko, mpilalao mahay tsara ny tenisy ambony latabatra aho.
GV: Inona no tianao ho fantatry ny olona momba ny toerana onenanao?
Ao Sodana aho no monina. Fantatro fa mbola firenena mistery ho an'ny ankamaroan'ny olona i Sodana satria tsy ampy ny vaovao momba an'i Sodana ety anaty aterineto. Saingy, tiako ny milaza fa firenena mahafinaritra sy ahitàna karazan-javatra maro i Sodana.
Mety tianao ny hahafantatra hoe manana piramida miisa 200 i Sodana. Fantatro fa mety hahagaga ny maro aminareo izany, saingy eny, izay no zavamisy. Izao koa, ao Sodana no teraka ny renirano lehibe Nil satria Khartoum, renivohitra, dia eo amin'ny ambohipihaonan'ny Nila Manga izay avy any Etiopia sy ny Nil Fotsy avy any Ogandà.
GV: Fomba ahoana no nahitanao ny GV sy nanombohanao ho toy ny mpiaramiasa?
Nametraka rohy mankany amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra nosoratany ny namako Mohamed Sulieman (mpiaramiasa amin'ny GV), ary nanomboka tamin'izay fotoana izay aho no nanomboka nitrandraka ilay sehatra, isaky ny tapak'androko.
GV: Nahoana no heverinao fa zavadehibe ny GV?
Mahaleotena ny GV. Tsy afaka miteny betsaka ankoatra io teny io aho. Maro amin'ireo media sy sehatra mpampita vaovao no natokana sy natodika ho any amin'ny fihevitra na fomba fijerin'olona sasantsasany, fa ny GV dia tsy momba ny atsy na ny aroa rehefa mampita ny zavamisy!
GV: Fomba ahoana no nanovan'ny GV ny fomba fijerinao ny tontolo?
Hatramin'ny nandefasan'i Mohamed ilay rohy, nanomboka nitrandraka ny GV aho ary tsy nahita votoaty ampy momba an'i Sodana izay nanome ahy ny aingampanahy hanampy an'i Mohamed hampita ireo olana atiny misy ao Sodana ho fantatr'izao tontolo izao.
Araho ao amin'ny Twitter i Khattab, amin'ny @ga800l.